४ सय वर्ष पहिले नास्त्रदमसले मोदीबारे गरेको भविष्यवाणीमा के छ ? – Khabaarpati
४ सय वर्ष पहिले नास्त्रदमसले मोदीबारे गरेको भविष्यवाणीमा के छ ?
January 10, 2021 January 10, 2021 goodmamLeaveaComment on ४ सय वर्ष पहिले नास्त्रदमसले मोदीबारे गरेको भविष्यवाणीमा के छ ?
आजभन्दा करिब ४०० वर्ष पहिल्यै आफ्नाे “द सन्चुरी” नामक पुस्तकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी सहित भारतका बारेमा थुप्रै भविष्यवाणी गरेकाे उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी पतिले भारतकाे भ्रमण गरेपछि र भ्रमणका क्रममा भारतसंग मिलेर विश्व भरका आतंककारी लाई समाप्त पार्न सकिने कुरा जानकारी गराएपछि विश्वभर उक्त भबिस्यबाणी काे चर्चा चलेकाे थियाे ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
उनले बताए अनुसार दुनियाँका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले अहिले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनलेे गरेकाे भबिस्यबाणीकाे अहिले भारत लगाएत विश्वभरि नै चर्चा चलिरहेकाे छ। भारत र अमेरिका मिलेर विश्वमा शान्ति ल्याउन मद्धत गर्ने कुराकाे अभिव्यक्तिले अमेरिकी राष्ट्र पति र माेदिमाथि विश्वकाे ध्यान भारमा केन्द्रीत हुने छ ।
धार्मिक र साधु भेषमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले लामाे समयसम्म राजनीति गर्ने कुराकाे उनकाे भविष्यवाणीमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व हल्लाउने राजनीति गरेर विश्वमा हिन्दुराज्य र हिन्दु हरुकाे बाहुल्यता स्थापना उनकाे कार्याकालमा हुने समेत उल्लेख गरेका छन् । २०२१ काे बारेमा भविष्यवाणी गर्ने तेस्ता भविष्यवाणीवक्त्ता काे थिए ।
महान भबिस्य वक्ता नस्त्रेदमसकाे जन्म १४ डिसेम्बर सन् १५०३ मा फ्रान्सकाे सेन्ट्रेमी भन्ने एक गाउमा भएकाे थियाे । सामान्य परिवारमा जन्मेका भबिस्य वक्ता पश्चिमी मुलुकका चर्चित भबिस्यबाणीका नामले पनि चिनिन्छन । उनले पछिल्लो समयमा आफैंले गणना गरेर निकालिएकाे पञ्चाङ्गकाे पनि निकै चर्चा कमाएकाे थियाे र उनले विश्वका धेरैजसो देशकाे भविष्य वाणी गरेकाे र उक्त भबिस्यबाणी तस्य साबित समेत भएकाले अहिले पनि उनकाे चर्चा निकै चलिरहेकाे छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
जुन उनले गरेकाे सन् २०२१ का लागि उनेले गरेकाे भविष्यवाणीकाे चर्चा नयाँ नयाँ वर्ष सुरुहुदैेगर्दा चर्चा सुरुभएकाे छ । अहिलेसम्म उनले गरेका भबिस्यबाणी कत्तिको मिलेका छन् । साेह्रै सताव्दिमा फ्रान्समा जन्मिएका नास्त्रेदमसले चारसय वर्ष पहिल्यै नै २० औ शताब्दीको बारेमा भबिस्यबाणी गरेकाले अहिले उनकाे चर्चा निक्कै चलिरहेकाे छ ।
” द सन्चुरी” नामक पुस्तकमा उनले लेखेका छन् र उनकाे भविष्यवाणी कविताको माध्यमबाट पनि जानकारी गराउने गरेका छन् । व्रिटिस राजकुमारीकाे मृत्यु जर्मनीका साशक “एडल फिडेल”काे उदयकाे, परमाणु बम, दाेस्राे विश्वयुद्ध, अमेरिकामा भएकाे पेन्टाघन आक्रमण लगाएतका थुप्रै चर्चित घटना हरुकाे बारेमा उनले पहिल्यै आफ्नाे पुस्तक ” द सेन्चुरी” नामक पुस्तकमा लेखेका थिए र उक्त पुस्तक नै उनकाे भविष्यवाणी थियाे । उनले सन् २०२१ देखि सन् २०२२ सम्ममा तेस्राे विश्वयुद्धको बारेमा समेत भबिस्यबाणी गरेकाछन् । उक्त युद्धमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा बताइरहेकाले अहिले उनकाे चर्चा चलिरहेकाे छ ।
नस्त्रेदमसकाे अर्काे चर्चित पुस्तक “प्राेफेसिस” नामक पुस्तकमा ९५० ओटा भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले गरेका भविष्यवाणीमा कविताका हरफहरुमा काेड भाषामा लेखेकाे पनि पाइन्छ । विश्वभरका चर्चित मानिस हरुकाे भबिस्यबाणी प्राय मिलेकाे र हाम्राे छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदिकाे बारेमा गरिएकाे भबिस्यबाणी पनि यतिबेला चर्चामा छ ।
माेदिकाे बारेमा आउने दिनमा एसियाकै शक्तिशाली नेता र उनकाे पालामा हुन्दु धर्मकाे विश्वभर चर्चा हुने भनेर गरेकाे भबिस्यबाणीमा आम मानिसकाे चासाे बढेकाे छ । यसै समयमा ठुला ठुला दैवीप्रकोप र भुकम्पका कारणबाट विशेषगरी अमेरिकी राज्य हरुमा ठुलै मानवीय तथा भाैतिक क्षेति व्याेहर्नु पर्ने पनि बताएका छन ।
विश्वभर आर्थिक मन्दिकाे सामना गर्नु पर्ने र भारत लगाएत दक्षिणी देशहरुमा पानिका कारणले आउने बढीबाट धेरैजनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने छ भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् ।
लेखक ज्याेतिष तथा बास्तुविद हुन् ।
यस्ता लक्षण देखिए भने नगर्नुहोस् वेवास्ता, हुनसक्छ ब्रे न ट्यु मरको समस्या
वर्षमा एक दिन वैशाख १ गते मात्र फूल्ने ‘हारम’ फूलको अनौठो रहस्य, १ गते फूल्यो र त्यही दिन ओइलायो यो फूल